Iitubhu zeCarbon zeFibbon epheleleyo, ityhubhu yeCarbon Fibre, Umkhiqizi weCarbon Final Oval Tube eTshayina
Inkcazo:Iibhloko zeCarbon Fibre epheleleyo,Ikhabhon Fibre Tube,Icwecwe elipheleleyo leCarbon Fibre,Ikhabhoni ye-Carbon Final Oval Tube,,
Home > Imveliso > Ikhabhoni yeCarbon Tube kunye neClamp > Isithsaba seCarbon Fibre
Iintlobo zeMveliso ze- Isithsaba seCarbon Fibre , singabakhiqizi abakhethiweyo baseChina, Iibhloko zeCarbon Fibre epheleleyo , Ikhabhon Fibre Tube ababoneleli / umkhiqizo, iimveliso eziphezulu zexabiso eliphezulu ze-R & D kunye nokuvelisa, sinemisebenzi epheleleyo emva kokuthengisa kunye nenkxaso yobuchwepheshe. Khangela phambili ekusebenzisaneni kwakho!
Ukuthengisa okushushu kwe-Octagonal Carbon Fibre Boom
I-Hobbycarbon 3k twill matte carbon fiber iibhubhu
Ukuthengisa okushushu kwe-twill yecuba ye-carbon fiber ityhubhu
Hobbycarbon 3K umqulu ogqunywe ngecuba yecarbon fiber
I-Wholesale Matte Gqibezela i-Pill Carbon Fiber Tube
Ipleyiti yokuqengqeleka equtywe matte ikhabhoni yentsimbi ye-carbon
Ukuthengisa okushushu kombala wekhabhoni ojikelezayo / iityhubhu ezikwere
I-OEM Carbon Fibre Tube Yenze iRoll Tube eqhotyoshelweyo
Isiko lobugcisa lenze idayipi enkulu yecarbon fiber
Ukuxhathisa kobushushu obuphezulu i-3K ikhabhoni yecuba ejijekileyo
umatshini wekhabhoni usisi-3k umenzi welaphu lekhabhoni kwiflashidi ene-2mm, 3mm, 6mm, 10mm product
Umgangatho wobushushu be-carbon fiber ityhubhu eyenziwe itowudi Iimpawu : I-fiber ye-Carbon luhlobo olutsha lwamandla aphezulu kunye nemathiriyeli ephezulu yefomulus enomxholo ongaphezulu kwe-95% yeekhabhoni. Iintsinga zeCarbon ziyatshintsha kwaye...
Ingcaciso yeMveliso: Umgangatho wobushushu be-carbon fiber ityhubhu eyenziwe itowudi Iimpawu : I-fiber ye-Carbon luhlobo olutsha lwamandla aphezulu kunye nemathiriyeli ephezulu yefomulus enomxholo ongaphezulu kwe-95% yeekhabhoni. Iintsinga zeCarbon...
eguqulwe ngokomgangatho ophezulu isikwere ityhubhu yecarbon Iimbonakalo: 1. Ubunzima bokukhanya kunye namandla aphezulu 2. Ugqatso olugqwesileyo. 3. Ukuxhathisa ukuvela. 4. Ukucwangciswa okuhle 5. Bhetyebhetye kakhulu. 6. Inkangeleko entle. Igama...
Amandla aphezulu i-3K octagonal carbon fiber tubing Inxalenye yethu yecuba ye-carbon fiber ibonakalisa amandla agqibeleleyo, ukuqina, ukukhanya kunye nobungqingqwa.octagonal yecarbon fiber ithuma iimpawu ezintle zomgangatho xa kuthelekiswa...
Ingcaciso yeMveliso Ubunzima obuqinileyo bokukhanya kwe-carbon fiber macala onke I-Tube yeCarbon Fibre inezibonelelo zamandla aphezulu, ubomi obude, ukumelana ne-corrosion, ubunzima bokukhanya kunye nobunzima obuphantsi. Isetyenziswe ngokubanzi...
Ubungakanani obucwangcisiweyo beekhabhonibhuli ezisisikwere Ingcaciso yeMveliso Isixhobo: Iipesenti eziyi-100 zeekhabhoni, i-Vinyl resin, i-Epoxy resin. Ubungqingqwa: 1.0mm / 1.5mm / 2.0mm Ubude: ubude obude buyi-1500mm Inkangeleko: I-3K i-twill...
Uxinzelelo oluphezulu lwe-carbon fiber tube octagonal tube Ingcaciso yeMveliso Isixhobo: Iipesenti eziyi-100 zeekhabhoni, i-Vinyl resin, i-Epoxy resin. Ubungqingqwa: 1.0mm / 1.5mm / 2.0mm Ubude: ubude obude buyi-1500mm Inkangeleko: I-3K i-twill...
IHobbyCarbon hight esemgangathweni ye-carbon fiber fiber ityhubhu Ingcaciso yeMveliso Isixhobo: Iipesenti eziyi-100 zeekhabhoni, i-Vinyl resin, i-Epoxy resin. Ubungqingqwa: 1.0mm / 1.5mm / 2.0mm Ubude: ubude obude buyi-1500mm Inkangeleko: I-3K...
Intshayelelo yeMveliso Ubunzima beCarbon Fibre ye-Tube kunye ne-Twill Plain Uluhlu lwefayibha yekhabhoni lusekwe kwimodyuli emdaka yefungi. Imodemus enesisindo ingachazwa njengomyinge wenani lamandla okudonsa akhutshwe kwinto ngaphambi kokuqhekezwa....
Intshayelelo yeMveliso I-ODM kunye ne-OEM 3K Carbon Fiber Square Tube Uluhlu lwefayibha yekhabhoni lusekwe kwimodyuli emdaka yefungi. Imodemus enesisindo ingachazwa njengomyinge wenani lamandla okudonsa akhutshwe kwinto ngaphambi kokuqhekezwa....
Ukuthengisa okushushu kwe-Octagonal Carbon Fibre Boom Ingcaciso yeMveliso Ityhubhu yekhabhoni inezinzuzo zamandla aphezulu, ubomi obude, ukumelana ne-kutu, ubunzima bokukhanya kunye nobunzima obuphantsi. Isetyenziswe ngokubanzi kwii-kites, imodeli...
I-Hobbycarbon 3k twill matte carbon fiber iibhubhu Ingcaciso yeMveliso Ityhubhu yekhabhoni inezinzuzo zamandla aphezulu, ubomi obude, ukumelana ne-kutu, ubunzima bokukhanya kunye nobunzima obuphantsi. Isetyenziswe ngokubanzi kwii-kites, imodeli...
Ukuthengisa okushushu kwe-twill yecuba ye-carbon fiber ityhubhu Iibhubhu zekhabhoni / imibhobho: 1. Intshayelelo Ezi zi-3K Octagonal Carbon Fiber Tube zenziwe nge-carbon ecocekileyo yefibre nge-twill entle okanye i-weave ebonakalayo; Ifumaneka...
Hobbycarbon 3K umqulu ogqunywe ngecuba yecarbon fiber Iibhubhu zekhabhoni / imibhobho: 1. Intshayelelo Ezi zi-3K Octagonal Carbon Fiber Tube zenziwe nge-carbon ecocekileyo yefibre nge-twill entle okanye i-weave ebonakalayo; Ifumaneka ngemibala...
I-Wholesale Matte Gqibezela i-Pill Carbon Fiber Tube Iibhubhu zekhabhoni / imibhobho: 1. Intshayelelo Ezi zi-3K Octagonal Carbon Fiber Tube zenziwe nge-carbon ecocekileyo yefibre nge-twill entle okanye i-weave ebonakalayo; Ifumaneka ngemibala...
Ipleyiti yokuqengqeleka equtywe matte ikhabhoni yentsimbi ye-carbon Ingcaciso yeMveliso Uluhlu lwefayibha yekhabhoni lusekwe kwimodyuli emdaka yefungi. Imodemus enesisindo ingachazwa njengomyinge wenani lamandla okudonsa akhutshwe kwinto ngaphambi...
Ukuthengisa okushushu kombala wekhabhoni ojikelezayo / iityhubhu ezikwere Ityhubhu yekhabhoni yeCarbon idityaniswe neCarbon Fibre Twill (okanye i-Plain) Indwangu yeLebhu, Unidirectional Carbon Ifayibha ye-prregreg kunye ne-epoxy resin. Ityhubhu...
I-OEM Carbon Fibre Tube Yenze iRoll Tube eqhotyoshelweyo 1. Intshayelelo Ezi zi-3K Carbon Fibre Tubes Carbon zenziwe nge-carbon ecocekileyo yefibre enewarley entle okanye ieverwood ecacileyo; Ifumaneka ngemibala eyahlukeneyo kunye nobungakanani...
Isiko lobugcisa lenze idayipi enkulu yecarbon fiber Ingcaciso yeMveliso Ityhubhu yekhabhoni yeCarbon idityaniswe neCarbon Fibre Twill (okanye i-Plain) Indwangu yeLebhu, Unidirectional Carbon Ifayibha ye-prregreg kunye ne-epoxy resin. Ityhubhu...
Ukuxhathisa kobushushu obuphezulu i-3K ikhabhoni yecuba ejijekileyo Iibhubhu zekhabhoni / imibhobho: Iicubbon zeCarbon fiber, iCarbon Fibre Plate, Icandelo elingu-Sapecial Eliphepha Iphepha lekhabhon fiber iphepha lokuhombisa . Intsebenzo kunye...
KwiChina Isithsaba seCarbon Fibre Abaxhasi
Iishubhu ze-carbon fiber ezigcweleyo zikhanya kakhulu kwaye zomelele.
Zisetyenziswa ngokubanzi kwiAviation, Drone, DIY njl.
Iityhubhu zethu ezidumileyo zigqunywe yicarbon fiber macala machubhu kunye neetyhubhu ezi-octagonal. Imingxunya yokumba, ukuntywila kunye noshicilelo lwelogo inokubonelelwa.
Kwindibano, sinikezela nge-aluminium clampes.
Zenziwe nge-6061-T6 aluminium ezibonakalayo.Ukuba ufuna ezinye izinto, ziyafumaneka.
Sinee-size ezahlukeneyo, nceda ujonge itshathi engezantsi.
Iibhloko zeCarbon Fibre epheleleyo Ikhabhon Fibre Tube Icwecwe elipheleleyo leCarbon Fibre Ikhabhoni ye-Carbon Final Oval Tube Iitubhu zeCarbon Fibre epheleleyo